2021 Obi ekele Afọ Ọhụrụ nke Airwoods
Ememe ndị ahụ nwere ike iyi ka ọ na-agwụ afọ a na ihe niile na-eme. Ọrịa ahụ na-aga n'ihu na-eme ka ụwa na-enyo anyị enyo na ọ na-emetụta anyị niile, na nzuzo na ndị ọkachamara. Anyị na-ekele gị nke ukwuu maka ntụkwasị obi gị, nghọta gị ...
Airwoods Webinar ： Cleanroom Design & Construction Maka Disposable Mask Manufacturing
Dịka mgbasa mgbasa ozi dị egwu nke Covid-19, mkpa ọ dị maka mkpuchi mkpofu na-abawanye ụba. Ọtụtụ ndị ahịa na-atụle imepụta nkpuchi, anyị ghọtara na ha ga-enwe ọtụtụ ajụjụ ma ọ bụrụ na ha na-etinye ụlọ mposi maka oge mbụ. Nke ahụ bụ ...
Ọrịa Control Center PCR Cleanroom Virtual tour
Soro ndị ọrụ ngo anyị Wayne na Fauna ka anyị nwee njem nlegharị anya nke ụlọ mposi ọhụrụ ISO 8 PCR maka ebe a na-achịkwa ọrịa. Gaa na weebụsaịtị anyị maka ozi ndị ọzọ. Ọrụ: Centerlọ Ọrụ PCR Cleanroom Control Center; Ngwa: Nje Virus T ...
Airwoods Project: Disposable Nkpuchi Manufacturing Cleanroom
Cleanroom Ngwa: Disposable Mask Manufacturing Workshop Factory Total Area: 546m2 Cleanroom Mpaghara: 440 m2 Cleanroom Cover Area: Production omumuihe, Nwoke / nwanyị Change Room, Aka Saa Room, Corridor, Ngwaọrụ Room, Raw ihe ụlọ, unpacking room, Waste Roo .. .
Ihe omume Airwoods: Controllọ Ọrụ Na-achịkwa Ọrịa PCR Cleanroom
Ọrụ: Centerlọ Ọrụ PCR Cleanroom Control Center; Ngwa: Nyocha Viruses Iji Chọpụta Ọrịa; Leveldị ọcha: ISO 8 HVAC Sistem: 100% ikuku ikuku njikwa + condensing nkeji Oge iwu: 30 Days Ebe a na-ewu: 150m2 Ebe ọ bụ na 2007 Since Airwoods raara onwe ya nye ...
Airwoods PCR Cleanroom Onsite Okwu Mmalite
site ha na 20-10-07
Nnukwu mmụba nke ule PCR na-eme ka ụlọ ọrụ PCR bụrụ isiokwu dị ọkụ na ụlọ ọrụ nhicha. Na Airwoods, anyị na-ahụkwa mmụba dị ukwuu nke nyocha ụlọ nyocha PCR. Ọ bụ ya mere anyị ji gbaa vidiyo onsite a iji kọwaa ihe nyocha PCR. Sonyere anyị ...
PCR Lab Challenge & Solution - 8/12 Airwoods Webinar Mara
Alibaba si Live Live Show Replay pụta ìhè. Kedu otu esi edozi nsogbu nke ikuku na ikuku na nsogbu ikuku na PCR Lab? Onye isi oru ngo anyị Wayne na-enye nnwale na nyocha ụzọ dị mkpirikpi vidiyo a. Ebe ọ bụ na 2007 ， Airwoods raara onwe ya nye t ...
Nnyocha ụlọ ọrụ - 8/12 Airwoods Webinar mere ka ọ pụta ìhè
Alibaba si Live Live Show Replay pụta ìhè. Onye nnọchi anya Airwoods Wayne nyere nchịkọta dị mkpirikpi nke Airwoods gara aga ụlọ ọrụ PCR labs. Kemgbe afọ 2007 ， Airwoods raara onwe ya nye iji nye hvac ihe ngwọta maka ọrụ dị iche iche. Anyị na-enye profe ...
Nọgide na-enwe nrụgide PCR Lab ụlọ nyocha - 8/12 Airwoods Webinar Mee ka ọ pụta ìhè
Alibaba si Live Live Show Replay pụta ìhè. Otu ihe ịma aka siri ike nke ụlọ nyocha PCR bụ ịnọgide na-enwe nrụgide ụlọ nyocha. Onye njikwa ọrụ anyị Wayne na-enye nyocha nyocha na webinar August 12th. Kemgbe afọ 2007 ， Airwoods raara onwe ya nye iji nye hvac s ...
Ọnụ nke ụlọ nyocha PCR - 8/12 Airwoods Webinar Hightlight
Alibaba si Live Live Show Replay pụta ìhè. Otu n'ime ajụjụ ndị ahịa na-ajụkarị bụ ọnụ ahịa ụlọ PCR. Onye njikwa ọrụ anyị Wayne na-enye atụmatụ ngụkọta oge dabere na ahụmịhe China na nke Ofesi. Ebe ọ bụ na 2007 ， Airwoods raara nye p ...
Na-arụ ọrụ na Airwoods - 8/12 Airwoods Webinar Chetara
Alibaba si Live Live Show Replay pụta ìhè. Etu esi arụ ọrụ na Airwoods? Soro onye njikwa ọrụ anyị Wayne kọwara usoro ọrụ anyị nke PCR Labs. Kemgbe afọ 2007 ， Airwoods raara onwe ya nye iji nye hvac ihe ngwọta maka ọrụ dị iche iche. Anyị na-enyekwa prof ...
Alibaba Liveshow: Gịnị bụ PCR Clean room?
site ha na 20-08-21
N'oge a ọtụtụ ugbu a Covid-19 ule ugbu a na akụkọ niile na-abịa site na iji PCR. Nnukwu mmụba nke ule PCR na-eme ka ụlọ ọrụ PCR bụrụ isiokwu dị ọkụ na ụlọ ọrụ nhicha. Na Airwoods, anyị na-ahụkwa mmụba dị ukwuu nke ụlọ nyocha PCR ...